China Medical bodwa iso mveliso kunye nabenzi | Kangyuan
Ukubekwa ecaleni kwezonyango
Iimveliso zibhalisiwe kwisixhobo sezonyango Class I kunye ne-CE, ubhaliso lwe-FDA.
Uyilo lwephedi yempumlo ye-Ergonomic ayonyusi buran empumlweni kwaye ilunge ngakumbi.
Uyilo lwevalve oluhlengahlengisiweyo kumacala omabini lunokuphefumla nangaliphi na ixesha ukunqanda ifuthe lenkungu.
Yenziwe ngezinto zepolymer, inokuthintela ngokufanelekileyo ifuthe lomzimba wamanye amazwe kunye nokutshiza okungamanzi.
Iilensi zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu wePC, ngokuhambisa okuphezulu kunye nenkcazo ephezulu
Kufanelekile kubantu abanokulungiswa kombono, kwaye ibhanti yentloko kulula ukuyilungisa. zilungele iintlobo ezahlukeneyo zentloko.
Le mveliso yenziwe ngezinto zepolymer, ukukhanya kwaye yomelele, kwaye inokusetyenziswa kwiimeko ezininzi, ezinje ngeelebhu, izibhedlele, ngaphandle, njl., Inokuthintela ngokufanelekileyo ifuthe lesanti kunye nothuli, ukutshiza okungamanzi okanye ukutshiza.
Omabini la macala axhotyiswe ngemigudu yokulawula umoya, engangeni moya xa isetyenziswa, kwaye inokungena umoya nangaliphi na ixesha ngezivalo ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuthuthuzela, iilensi ine-anti-fog .
Iilensi zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu zePC ezinenkcazo ephezulu, enokuqinisekisa ukuba ayizukubangela umbono oqhelekileyo womzimba womntu ochaphazelekayo, unokunxitywa kwaye usebenze ngeglasi ngaxeshanye.
Umda osebenzayo weemveliso
Isetyenziswa njengomsebenzi okhuselayo ngexesha lokuhlolwa kunye nonyango kumaziko onyango, kuthintela ulwelo lomzimba, ukutshiza kwegazi okanye ukutshiza.
Ukucaciswa kwemveliso: uhlobo lwabantu abadala A, uhlobo lwabantu abadala B
Ukupakisha imigaqo: Ipc / PE ibhegi 10pcs / ibhokisi 100pcs / ibhokisi
Ubungakanani beCarton: 42cm x36cmx47cm
Egqithileyo Isigqumathelo sokwahlulahlula ezonyango
ukubekwa ecaleni kwemaski yamehlo
yodwa yonyango imaski yamehlo
Ukusetyenziswa kwezinto zonyango ezilahlwayo
Ingubo yokwahlukanisa ezonyango
Ezilahlwayo imaski yokhuselo KN95
Isigqumathelo sokwahlulahlula ezonyango